Sometimes when i say i am fine i want u to look into my eyes and ask tell the truth...
ကျွန်မလုံးဝကိုဟန်မဆောင်တတ်ပါဘူး..စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်...စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်..ကျွန်မမျက်လုံးတွေကလိမ်ညာလို့ မရတာ...ကျွန်မရဲ့ ပျော့ကွက်တစ်ခုများဖြစ်နေမလား??
၇။ဟင်းကောင်းကောင်းမချက်တတ်တာ...အခုချိန်အထိတော့ကျွန်မဟင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်အောင်ကြိုးစားနေဆဲပါ...practice make perfect ဆိုတဲ့စကားပုံလေးအတိုင်းပေါ့....
၈။ကိုယ့်ကိုနာကျင်စေခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူမေ့ပျောက်ပစ်လို့ မရတာ...အတိတ်ဆိုတာကျွန်မအတွက်တော့လွယ်လွယ်န့ဲမမေ့ပျောက်နိုင်တဲ့..လွယ်လွယ်နဲ့ မေ့ပျောက်ပစ်လို့ မရတဲ့အရာတွေပါဘဲ...ဥပမာပြောရရင်တော့...ကိုယ့်ကိုနာကျင်စေတဲ့အရာတွေပေါ့..လူတိုင်းကိုယ်နာကျင်ခဲ့ရတာတွေကိုအမှတ်တရရှိနေခဲ့ကျတာပဲလေ....
ကျွန်မအတွက်တော့အားလပ်ချိန်ဆိုတာတွေကိုအိပ်ချိန်တွေနဲ့ အစားထိုးလိုက်တာဘဲ...လူကျန်းမာမှစိတ်လဲချမ်းသာမှာ...correct??? :D
Posted by PINKLADY2comments
ဒီလောကမှာ “ကိုယ်” (myself) ဆိုတာ တစ်ဦးတည်းပဲရှိတယ်။ ကိုယ်နဲ့တူတဲ့လူ နောက်ထပ် လုံးဝမရှိနိုင်ဘူး။ “ကိုယ်” မှာ ကိုယ်ချင်းစာ ကြင်နာတတ်တဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံရှိတယ်။ ချစ်ခြင်း၊ သနားခြင်းတွေနဲ့ ခုန်လှုပ်နေတဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံရှိတယ်။ “ကိုယ်”ဟာ ရိုသေလေးစား ခံထိုက်သူဖြစ်တယ်။ အချစ်ခံထိုက်သူဖြစ်တယ်။ ဒါတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ ရလဒ်တွေဖြစ်တယ်။ ယုံကြည်မှုက လူတွေရဲ့ အကဲ့ရဲ့၊ အနှိမ်ခံတာကို လျှစ်လျှူရှူထားပေးတယ်။
ကိုယ့်ဘေးကလူတွေ ကိုယ်ကို ချစ်ခြင်းတွေ ပေးစွမ်းမရှိတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်ကို ပွေ့ဖက်ဖို့ အားအင်တွေ မရှိတဲ့အခါ သူတို့ကို ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်ခွင့်လွတ်ပေးလိုက်ပါ။ သူတို့မှာ လူတွေကိုချစ်ဖို့၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ချစ်ဖို့ အချစ်တွေ ပါမလာခဲ့လို့ပါပဲ။
ရိုးသားမှု၊ ရိုသေလေးစားမှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ကိုယ်ကပေးဆပ်နေလျှက်နဲ့ လူတွေရဲ့ လှောင်ပြောင်မှု၊ ကဲ့ရဲ့ဆဲဆိုမှု၊ အပြစ်ပုံချမှုတွေ သင် ခံနေရသေးတယ်ဆိုရင် သင်မကောင်းလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ပေးဆပ်မှုတွေကို အဲဒီလူတွေ လက်ခံနိုင်တဲ့ အဆင့်မရှိသေးလို့ပါ။
တကယ်လို့ သင့်ခန္ဓာသင့်ဝိညာဉ်တွေ ညှိုးနွမ်းခဲ့ရင် နားနှစ်ဖက်ကို ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ တစ်ခြားလူရဲ့ ထိခိုက်နာကျင်စေမယ့် စကားတွေနဲ့ ကိုယ့်နှလုံးသားကို အပြည့် မဖြည့်လိုက်ပါနဲ့။ နေရာလပ်တစ်ခု ချန်ထားပြီး ယုံကြည်မှုတွေ ဖြည့်ပေးပါ။
ရင်ထဲက လာတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အစစ်အမှန်က အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူး။
စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက် အကြောင်းတရား မလိုပါဘူး။
ယုံကြည်မှုကို လက်ကိုင်ထားရင် .... လူတိုင်းက အချစ်ခံထိုက်သူတွေဖြစ်တယ်။
Posted by PINKLADY 1 comments
Labels: From Nine Nine Sanay
Posted by PINKLADY0comments
ငါပျော်ပါတယ် မင်းဆီကအကြင်နာငွေ့ ငွေ့ လေးတွေရတယ်လို့ 
ငါငိုချင်တယ် မင်းဆီက ဂရုမစိုက်တော့တဲ့အပြုအမူတွေ
ငါကိုယ်တိုင် ခံစား သိရှိလာတဲ့အခါ တိုင်းပေါ့..
အမေ့ရဲ့ ကြင်နာယုယမှုတွေနဲ့ 
Top 20 Hot Models..
just upload it for fun..
hope u all like it and have fun..
Nature of Guy...:D
သူ...... သိပ်ကောင်းတာပဲ။ ငါ့မျှော်လင့်တဲ့နေ့ ရောက်လာခဲ့ပြီ။
သူမ.... နင် နောင်တရမလား
သူ...... ဟာ.. တစ်ခါမှ အဲဒီလို မစဉ်းစားမိဘူး။
သူမ.... ငါ့ကို တကယ်ချစ်လား
သူမ.... ငါ့အပေါ် သစ္စာဖောက်မှာလား။
သူ...... အဲဒီလို တစ်ခါမှ မတွေးထားမိဘူး။
သူမ.... ငါ့ကို တစ်ခါလောက် နမ်းပါလား။
သူ...... အင်း.. တစ်ခါထက်ကို မကဘူး။
သူမ.... ယူပြီးရင် နင်ငါ့ကို ရိုက်မှာလား။
သူ...... လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တာ
သူမ.... ငါ နင့်ကို ယုံရမလား...
စာကို အောက်မှ အထက်သို့ တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပါ။
From Nine Nine Sanay (1)
Photo Poem (3)
Short Note (5)
TH!nK........P!nK © 2007 *Feito por Templates para Você*